National Power News:: पिडितले कहाँ गयर न्याय पाउने ? National Power News:: पिडितले कहाँ गयर न्याय पाउने ?
पिडितले कहाँ गयर न्याय पाउने ?
Monday, August 27, 2018 National Power
दिर्घराज जोशी / धनगढी, कैलाली -
म एउटा आम नेपाली । मेरो परिचय सुन्दर शान्त र विशाल देशको गौरवान्वित र बहादुर निर्भिक नेपाली तर आज मेरो परिचय फेरिएको छ । आज एउटा हुतिहारा शोषित,पिडित आत्माविश्वास नभएको र आफ्नै देशमा आफ्नो जिउ ज्यानको सुरक्षा मागिरहेको एक लाचार नेपालीमा परिणत भएको छ । एउटा अन्धकार भविष्य भएको देशको नागरिक,सत्तालाई कमाई खाने थलो र देशको ढुकुटीलाई आफ्नो बाबुको विर्ता सम्झने शोषक नेतृत्वले राज गरेको देशको नागरिक, दिन भरि भारि बोकेर सांझमा शान्तिको गाँसा निल्न नपाउने देशको नागरिक हो म ।
जहाँ विहान घरबाट पढ्न निस्केकि छोरी दोस्रो दिन विभत्स फेला पर्छ, म त्यहि देशको नागरिक हो । प्रसंग एउटी १३ वर्षिया वालिकाको हो जसले पढ्नको लागि घर छोडिन तर त्यहि घरमा कहिल्यै फर्किनन् । दोस्रो दिन उनको बलत्कृत मृत शरिर उखुबारीमा भेटिन्छ, पिडित पक्षले न्याय माग्दा सिंगो प्रशासन र सरकार बुट र बन्धुक लिएर अपराधिको संरक्षणमा उभिन्छ । उसले गरेका अपराधिक कृयाकलापहरुका सबै प्रमाणहरु नष्ठ गरिन्छ,अपराध भएको २५ दिनपछि मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा भौतारिएको रोगीलाई अपराधिको बिल्ला भिडाएर जवर्जजस्ती गल्ति स्वीकार्न लगाईन्छ र स्वीकार गराईन्छ पनि । अन्यायमा परेका आम जनताले सत्यको खोजीको माग गर्दा बुट र बन्धुकले धम्क्याईन्छ र मारिन्छ मेरो देशमा ।
यस्तै यस्तै भ्रष्ट चरित्र भएको मेरो दशेको सरकार भ्रष्टलाई नै संरक्षण गर्दै निरंकुश र क्रुरुर बन्दै गएको छ । उच्च प्रहरी प्रशासन र तिनका भरौटेहरुले गरेका कालाकर्तुतहरुलाई लुकाउन निर्दोष गरिवले ज्यान दिनुपर्ने , कहिले सम्म लुकाएर राख्लान एक दिन त पक्कै पनि तिनिहरुको कालो कतुर्तको पर्दाफास हुनेछ । कहिले सम्म जनताको टाउको छिनाल्छस् सरकार कहिले सम्म सहने ? तिम्रो अन्याय निर्दोषमाथि भएको ज्यादती कोहि कसैले सहने छैनन् । जति बम बारुद पड्काए पनि जनताले न्यायको आवाज अठाउन छा्ड्ने छैनन् । तिम्रो दमनमा आज फेरी एक नावालकले अन्यायसै ज्यान गुमाए । तिमिले ताकि ताकि नावालकलाई बन्दुकको निशाना बनायौँ । कैयौँ निर्दोष न्यायको माग गर्दा तिम्रो बन्दुकको निशाना बन्न पुगेका छन् । दुई तिहाईको दम्भले गर्दा होला अदालतले दोषि ठहर गरेको बलत्कृत ढुङ्गेल जस्तालाई आम माफि दियौँ,दश अर्ब भ्रषटाचार गरेको चुडामणि सर्मा १० लाख धरौटीमा छुट्छ तर त्यहि ठाउमा २००० रुपैया कर तिर्न नसक्ने पानिपुरीवालालाई पक्रेर जेल हाल्छौ । यस्ता गुण गानहरु त तिम्रा लाखौँ करोडौँ छन् ।
म एक सर्वसाधारण कसरी गाउन सकुला र ? तिम्रो प्रहरीहरुले प्रहरी मेरो साथी भन्दै चिल्लो नारा त लगायौँ ,तर साथीको ठाउमा क्ररुरता देखायौँ ,तिमिले यो नारा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको सट्ट ,प्रहरी अवसरवादी ,समय अनुसार सुहाउछ होला तिमिले साथी भाईको व्यवहार निकै ईमान्दिारीता पुर्वक निभायौ । पिडितलाई गोली खुवायौ अनि पिडिकलाई भिआईपि बनाएर सम्मान दियौ । त्यहि पिडितले तिरेको करले किनेको बन्दुकले हामी संगै बहादुरी देखाउछौ । वेलौरी सिमानामा भारतिय पक्षको आक्रमण रोक्न गएका सिमाना जोगाउन गएका गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरे तर तिमि खोर भित्र लकि रह्यौँ । राम रमिता हेरिरह्यौ । तिम्रो बन्दुक यदि टिकापुरमा पड्केको भए नावालक सहित ८ जनाको नरसंघार हुने थिएन् । त्यो वेला कहाँ लुकेर बसे सरकार तिम्रा बहादुर प्रहरी ? कञ्चनपुरको सिमानामा नेपालीले लगाएको तारवार भारतियले उखाल्दा तिम्रा प्रहरी टुलुटुलु हेरेको अझै पनि मेरो आँखामा झलझली आउँछ ।
म सर्वसाधारण त्यहि सिमानामा बसेर तिम्रो चर्तिकला हेरिरहेको थिए । जहाँ तिमीले प्रतिकार को त कुरै छोडौँ भारतिय प्रहरी सामु जाने हिम्मत सम्म गरेका थिएनौँ । तिम्रो निरिहपन सर्वसाधारण भन्दा निकै तल्लो स्तरको देखायौँ । आज मैले थाहा पाए, किन तिमी टिकापुर देखि महेन्द्रनगर सम्मको सिमा विवादमा गोली चलाएनौ तिमीले बन्दुकको नाल त सनि र खुना जस्ता निर्दोष न्यायको खोजीमा हिडेका आम नागरिकहरुका लागि बचाएर राखेका थियौ ! हो यहि देखाएको छ आज तिम्रो चरित्रले । देश र राष्ट्रको लागि चुईक्क बोल्न नसक्ने तिमी आफ्नो घरको कुकुर शेयर भएर देखायौँ । तिमी र तिम्रो सरकार आफ्ना कमजोरी लुकाउन बन्दुक ताक्दै छ । जनताको भावना संग खेलवाड गर्दै छ । हिजो जनताको भावना संग खेल्दा राजतन्त्र जस्तो शक्तिशाली पक्षले त शिर निहुराएर बेघर हुनुपरेको तिमीलाई थाहै छ । तिमीबाट जनलाले कुनै आशा गरेका छैनन् सरकार सक्छौ भने न्याय देउ सक्दैनौ भने गोली नदेउ ।
हुन त अपराधि बचाउने ठेक्कानै प्रभुले लिए पछि को संग न्याय माग्ने ? तरपनि जनताले हारमानेर भाग्नेवाला छैनन् । जसले आफ्नो जिउ ज्यानको रक्षा गरोस् भन्दै सत्तामा पुर्यायो उसैले बन्दुक ताक्न थाले पछि, सत्ता र शक्तिबाट तानेर निकाल्ने शक्ति पनि जनता संगै रहेको कुरा मेरो देशको क्रुरुर सरकारले राम्रोरी बुझे हुन्छ । त्यसैले बेला आईसक्यो जनतालाई तात्न नदे सरकार आफ्ना कमजोरीहरुलाई सुधार दोषिलाई कार्वाहि गर ति भ्रष्ठ भिआईपिहरुलाई कालकोठरीमा कोच र जनतामा शुरक्षाको अनुभुति गराउ । दुई तिहाई भन्दै नमात्तियौ अति भए पछि खति हुन्छ यो समय भनेको ताकि ताकि बन्दुक हान्न होईन अपराधिलाई समातेर कार्वाहि गर्ने र न्याय दिने हो ।
जनताको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित नगर, हैन भने ईतिहास साक्षि छ हिजो राष्ट्रिय, पञ्चायत,त्यसपछि रा.प्रपा हुँदा हुँदा राजतन्त्र ध्वस्त भएको कुरा अवगतै छ। अव तिम्रो पालो आउछ र ईतिहाँसमा तिम्रो नाम कालो अक्षरले लेखिने छ ।……………………………